» के कारणले चिलाउँछ यौनाङ्ग ?
७ माघ २०७६, मंगलवार २१:१७
प्रजनन अङ्गहरूमा प्राकृतिक रूपमा धेरै प्रकारका जीवाणुहरू हुन्छन् । विभिन्न कारणले शरीरमा रोगसंग लड्नसक्ने शक्ति कम भएको बेलामा जीवाणुहरूको अत्याधिक वृद्धिभई हुने सङ्क्रमणलाई प्रजनन अङ्गको सङ्क्रमण भनिन्छ । यी सङ्क्रमणहरू प्रजनन् अङ्गको सङ्क्रमण भएको व्यक्तिसग असुरक्षित यौन सम्पर्क राख्दा सर्ने सम्भावना हुन्छ ।
त्यसैले यसलाई यौन संक्रमित रोग भनिएको हो । भिरिङ्गी, सुजाक आदि यसका उदाहरणहरू हुन् । यौन संक्रमण भएको बेला असुरक्षित यौन सम्मर्क गर्दा एचआईभी पनि सर्न सक्छ ।
के यौन सम्पर्क नगर्दा पनि सङ्क्रमण हुन्छ ?
यौनाङ्ग वरिपरी राम्रोसग सरसफाइ नगर्नु त्यसको प्रमुख कारण हो । महिलाहरूमा रक्त अल्पता भएको छ भन रजस्वला हुदा प्रयोग गरिने प्याड (कपडा) र भित्र लगाउने कपडा पनि राम्रोसंग धोई घाममा सुकाएको छैन भने, विभिन्न संक्रमण हुन सक्छ । त्यस्तै, पुरुषहरूको लिङ्गको टुप्पो सफा गरेको छैन भने धेरै पटक एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग गरिएको छ भने पनि यौन सम्पर्क नभईकन यौन संक्रमण हुनसक्छ ।
के यौन रोगहरू यौनाङ्गहरूको सम्पर्कबाट मात्रै सर्दछ ?
कसरी थाहा पाउने सङ्क्रमणका लक्षणहरू ?
१। यौनाङ्ग वरिपरि चिलाउनु
२। यौनाङ्गहरूका वरिपरि मसिना विमिराहरू आउनु र पोल्नु,
३। लिङ्ग तथा योनीबाट असामान्य रूपमा स्राव हुनु (जस्तै स् पीप, सेतो पानी, गन्हाउने पानी, इत्यादि)
४। पिसाब गर्दा दुख्नु र पोल्नु,
५। अरु बेलाभन्दा धेरै पटक पिसाब लाग्नु,
६। घाउहरू आउनु वा सुन्निनु,
७। यौन सम्पर्क राख्दा दुख्नु,
महिलाहरूमा रजस्वला चक्रको बीचबीच समयमा पनि रगत बग्नु, आदि भएमा यौन रोग लागेको हुनसक्छ ।
यौन सङ्क्रमणको लक्षण देखिनासाथ स्वास्थ्यकर्मीहससंग सरसल्लाह लिइ उपचार गर्नुपर्छ । यसको उपचार कुनै पनि स्वास्थ्य निकायमा पाईन्छ । यौन रोग विशेषज्ञसंग परामर्श गर्न सकेमा झनै राम्रो हुन्छ । उपचार गर्दा पतिपत्नी दुबै वा यौन जोडी अरूपनि छन् भने उनीहरूलाई पनि खोजी खोजी गर्नुपर्छ । किनकि एक जोडीले मात्र उपचार गरेमा यो रोग फेरि पनि सर्न सक्दछ । यौन सङ्क्रमणको उपचार गरिरहेकाले यौन सम्पर्क नराख्दा नै राम्रो हुन्छ ।
उपचार गर्दा के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
के यसबाट बच्ने तरीकाहरू पनि छन् ?
यौन सम्पर्क विश्वासिलो साथीसंग मात्र राख्नु पर्छ । सामान्यतया हाम्रो सामाजिक संरचनामा महिलाको भन्दा बढी पुरुषहरूको यौन व्यवहार जिम्मेवारपूर्ण नहुनाले गर्दा महिलाहरूले एकै जना साथीसंग यौन सम्पर्क राख्दा पनि जोखिममा परेका छन् । सुईको प्रयोग गर्नुपरेमा निर्मलीकरण गरेको वा डिस्पोजेबल सुईको प्रयोग गर्नुपर्दछ । रगत लिदा सधै जाच गरिएको रगत मात्र लिनुपर्दछ ।एक जनाभन्दा बढी व्यक्तिसंग यौन सम्पर्क हुन्छ भने कन्डमको सही तरीकाले प्रयोग गर्नुपर्दछ र महिलाहरूमा पनि पुरुषलाई कन्डम प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने क्षमताको विकास हुनु अति आवश्यक छ । – हेल्थ टुडे